Firy ny Anaran’Andriamanitra?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Kwanyama Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Ossète Pangasinan Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Éwé
Iray ihany ny anaran’Andriamanitra. Soratana hoe יהוה izy io amin’ny teny hebreo, ary atao hoe “Jehovah” amin’ny teny malagasy. * Hoy Andriamanitra: “Izaho no Jehovah! Izany no anarako.” (Isaia 42:8) Miverina efa ho im-7 000 io anarana io, ao amin’ny Baiboly sora-tanana fahiny. Ary be dia be izany raha oharina amin’ny teny hafa ilazana an’Andriamanitra na anaran’olon-kafa ao amin’ny Baiboly. *
Misy anarana hafa iantsoana an’Andriamanitra ve?
Lazain’ny Baiboly hoe iray ihany no anaran’Andriamanitra. Ahitana anaram-boninahitra sy teny maro ilazana ny toetrany anefa ao amin’ny Baiboly. Ireto avy ny sasany amin’izany:
Apokalypsy 1:8; 21:6; 22:13
“Ny voalohany sy ny farany”, na “ny fiandohana sy ny fiafarana”, ary midika hoe tsy nisy Andriamanitra Mahery Indrindra talohan’i Jehovah, ary tsy hisy koa aoriany. (Isaia 43:10) Ny litera voalohany sy farany amin’ny abidy grika ny hoe alfa sy omega.
Avy amin’ny teny arabo ny hoe “Allah.” Tsy anaran-tsamirery anefa izy io, fa anaram-boninahitra midika hoe “Andriamanitra.” “Allah” àry no teny ilazana an’Andriamanitra, ao amin’ny Baiboly amin’ny teny arabo sy amin’ny fiteny hafa.
Ivavahana; Mahery. Teny milaza maro ilay teny hebreo hoe ʼElôhim ampiharina amin’i Jehovah, satria ilazana ny fahamboniany sy ny fahatsarany ary ny fahamendrehany.
1 Timoty 1:​11
Falifaly sy sambatra.​—Salamo 104:31.
Andriamanitry ny andriamanitra
Ilay Andriamanitra fara tampony, izay tsy hoatran’ireo “andriamanitra tsy misy dikany” ivavahan’ny olona sasany.​—Isaia 2:8.
Ilay fara tampony.
Be Voninahitra Mpanao ny olona
Nampisy an’izao rehetra izao.​—Apokalypsy 4:​11.
Daniela 7:​18, 27
Mpanjaka ambony indrindra.
Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be
Daniela 7:​9, 13, 22
Tsy nanam-piandohana; efa nisy foana talohan’ny zavaboary hafa rehetra.​—Salamo 90:2.
Izaho Izay Izy
Eksodosy 3:​14, Fandikan-teny Protestanta
Afaka manao izay rehetra ilaina mba hanatanterahana ny fikasany. Nadika koa izy io hoe: “Hoporofoiko fa Izaho Ilay Mahavita Izay Iriko.” (Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao) Izany no manazava ny dikan’ny anaran-tsamirery hoe Jehovah resahin’ny andininy manaraka.​—Eksodosy 3:​15.
Manana hery tsy hay tohaina. Hita impito ao amin’ny Baiboly ny teny hebreo hoe ʼEl Shaddai, izay midika hoe “Andriamanitra Mahery Indrindra.”
Masina sy madio kokoa noho ny zavaboary hafa rehetra.
Mpanafaka amin’ny loza na fandringanana.
Nampisy ny zava-drehetra.
Mpampianatra Be Voninahitra
Mpanome fampianarana sy tari-dalana mahasoa.​—Isaia 48:17, 18.
Isaia 41:14; Fandikan-teny Protestanta
Nanavotra ny olombelona amin’ny ota sy ny fahafatesana, rehefa nomeny ho sorom-panavotana i Jesosy Kristy.​—Jaona 3:​16.
Manana fahefana amin’ny olona sy ny firenena, hoatran’ny mpanefy tanimanga izay manana fahefana amin’ny tanimanga.​—Romanina 9:​20, 21.
Manana ny fahefana fara tampony izy hatramin’izay ka ho mandrakizay.
Mikarakara ny mpanompony.
Mihaino ny vavaka ataon’izay rehetra mino azy.
Eksodosy 34:14, Fandikan-teny Protestanta
Tsy milefitra mihitsy raha misy mandrafy azy. Nadika koa izy io hoe “mitaky ny hanompoana azy irery ihany.”​—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.
ʼAdôhn sy ʼAdônim amin’ny teny hebreo.
Tompo Fara Tampony
Manana fahefana fara tampony; ʼAdônai amin’ny teny hebreo.
Isaia 1:9, Fandikan-teny Protestanta; Romanina 9:​29, Fandikan-teny Protestanta
Mpifehy anjely maro be. Azo adika koa hoe “Jehovah Tompon’ny tafika” na “Andriamanitry ny tafika” ilay anaram-boninahitra hoe “Tompon’ny maro.”​—Romanina 9:​29, Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao; Fandikan-teny Katolika.
Salamo 18:​2, 46
Fialofana sy mpamonjy.
Anaran-toerana ao amin’ny Soratra Hebreo
Misy ny anaran’Andriamanitra ny anaran-toerana sasany ao amin’ny Baiboly, nefa tsy hoe anarana hafa iantsoana an’Andriamanitra ireny.
Genesisy 22:13, 14
“Hanome i Jehovah.”
“Tsato-kazo Famantarana ho Ahy i Jehovah” na “ny Tompo Fanevako.” (Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara) Afaka manatona an’i Jehovah ny olony, mba hahazoana fiarovana sy fanampiana.—Eksodosy 17:13-​16.
Mpitsara 6:23, 24
“I Jehovah dia Fiadanana.”
Nahoana no ilaina ny mahalala sy mampiasa ny anaran’Andriamanitra?
Zava-dehibe amin’Andriamanitra ilay anarany hoe Jehovah, matoa izy io miverina in’arivony ao amin’ny Baiboly.​—Malakia 1:​11.
Nasongadin’i Jesosy Zanak’Andriamanitra foana koa hoe zava-dehibe ilay anaran’Andriamanitra. Nivavaka tamin’i Jehovah izy, ohatra, hoe: “Hohamasinina anie ny anaranao!”​—Matio 6:9; Jaona 17:6.
Rehefa mahalala sy mampiasa ny anaran’Andriamanitra ny olona iray, dia manomboka minamana amin’i Jehovah. (Salamo 9:​10; Malakia 3:​16) Nampanantena Andriamanitra fa handray soa ireo namany. Hoy izy: “Satria izaho no niraiketan’ny fony dia hanafaka azy aho. Harovako izy, satria nanjary nahalala ny anarako.”​—Salamo 91:14.
Hoy ny Baiboly: ‘Misy ireo antsoina hoe “andriamanitra”, na any an-danitra na eto an-tany, toy ny isian’ny “andriamanitra” maro sy “tompo” maro.’ (1 Korintianina 8:​5, 6) Resahin’ny Baiboly koa anefa fa Jehovah no anaran’ilay tena Andriamanitra.​—Salamo 83:18.
^ feh. 3 Misy manam-pahaizana momba ny teny hebreo milaza hoe “Yahveh” na “Iaveh” no anaran’Andriamanitra.
^ feh. 3 Miseho in-50 eo ho eo ao amin’ny Baiboly ny hoe “Jah”, izay fanafohezana ny hoe Jehovah. Misy hoe “Jah” koa ny teny hoe “Haleloia” na “Aleloia”, izay midika hoe “Miderà an’i Jah.”—Apokalypsy 19:1; Fandikan-teny Protestanta; Fandikan-teny Katolika.
Maro no mino fa “fampianarana fototra ao amin’ny fivavahana kristianina” ny Andriamanitra telo izay iray. Inona no lazain’ny Baiboly?